Barakacayaal Ku Sugan B/weyne Oo Gurmad Dalbaday – Goobjoog News
Barakacayaal Ku Sugan B/weyne Oo Gurmad Dalbaday
Qoysas kasoo barakacay abaarta ka jirta deegaanno kamid ah gobolka Hiiraan kuna sugan magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle gurmad dhan walbo leh.
Qaar kamid ah barakacayaashan oo la hadlay Idaacadda Goobjoog, waxay sheegeen in roob ka da’ay B/weyne ay waayeen meel ay kaga kambadaan, islamarkaana saameyn aad u daran ku yeeshay.
Waxay tilmaameen ineysan haysan meel ay roobka gambaad kaga dhigtaa, islamarkaana xilli walbo ay u baahan yihiin in garab la siiyo si ay u helaan meel ay roobka iyo cadceedda ka hoos galaan.
“Waayeel, Haween iyo carruur baan leenahay, wixii roob ah ee da’ay korkeenna ayuu ku dhammaaday, ma haysanno bac aan gambaad kaga dhiganno, sidoo kale ma haysanno meel aan jiifsanno iskaba daa wax aan cunno, waxaan u baahannahay in gurmad degdeg ah nala soo gaaro” sidaasi waxaa yiri mid kamid ah barakacayaasha B/weyne ku sugan oo la hadlay Goobjoog.
Ugu dambeyn dadkaan ayaa si wadajir ah u codsaday in ugu horreyn lala soo gaaro raashiin ay cunaan iyo sidoo kale baco ay roobka kaga gambadaan.
4 Sano Kadib: 8 Arrin Oo Lagu Xusuusan Doono Xasan Sheekh
Ugrovb bgxytg Cialis us cialis 20mg price
Ubxrvf wnvebr Viagra or cialis over the counter cialis
Bucpmo tqouzm Buy viagra internet cialis generic
Qaccox mzrfwo generic cialis online pharmacy online
Xildhibaanada Mooshinka“ Xildhibaanada waxaa ay Lumiyeen Kalsoonidii ay u Hayeen Guddoomiyaha mar haddii uu ku sifoobay Musuq”
Aajspe zfeqmm online pharmacy Itcpu...
Rvlqgb drdtit canada online pharmacy Svmfi...
prasco labs plaquenil https://amstyles.com/...
Wstuld lxjrry pharmacy online Hqlst...
buy viagra online hong kong viagra half dose viagra pills fo...